Public Kura | » दुई इन्च पराजय दुई इन्च पराजय – Public Kura
दुई इन्च पराजय
सर्जिकल वार्डको एउटा बेडमा ऊ नम्बर एघार भएर सुतिरहेको छ । अस्पताल, बिरामी र अशक्त भएर डाक्टर, नर्सको इच्छामा उठ–बस गर्ने नियन्त्रित जीवन यहाँ मान्छेहरूले भोग्नुपर्छ । मर्न चाहनेहरूलाई पनि यस घेरोभित्र रहुन्जेल ‘इम्पोर्टेड’ इन्जेक्सन, मिक्स्चर र पिल्सहरूका दुखाइ आफ्नो पाखुरा र फिलामा र तीतो–टर्रोको स्वाद आफ्नो जिब्रोमा भोगी झ्यालमा जडेको सिसाका टुक्राबाट उज्यालोको लोभ देखाई बाँच्न बाध्य तुल्याइन्छ ।
बाहिरको उज्यालो जस्तोसुकै होस्, आँखा दुखाउने होस् वा कन्सिरी तताउने होस् वा मानिसको जीउभरिको घाउका टाटाहरूलाई देखाउने होस् वा एक बेकार स्नातकको प्यान्टको ‘हिप’मा च्यातिएको चारऔँले नग्नतालाई उद्भाषित गर्ने होस् र बाटोमा हिँड्ने क्यामरा भएको हरेक व्यक्तिलाई अर्थ व्यवस्थाको एक अतियथार्थ, अनुरञ्जित र सजीव ‘स्न्याप’ लिने मौका दिने होस् ।
कतिपटक उसले नर्सलाई भनिसक्यो— नर्स, त्यो ग्लास ‘प्यान’लाई पर्दाले छोपिदेऊ । कतिपटक उसले डाक्टरलाई भनिसक्यो— डाक्टर, मलाई मारिदेऊ ।
नर्सले एकपटक पनि उसले भनेको मानिन । ऊ भन्छे— त्यो प्रोस्टेटेड ग्लास हो, त्यसबाट कहाँ उतिसारो आँखामा लाग्नेजस्तो उज्यालो आउँछ र ?
डाक्टरले पनि उसको कुरा सुनेन । ऊ भन्छ— शंकर, डाक्टरको काम जीवन दिने हो, जीवन लिने होइन ।
आचारसंहिताका किताबमा कहिलेकहिले हो पढेर घोकेको कुरा । डाक्टर बूढो भइसक्यो, तर उसले बिर्सेको छैन ।
जीउभरि घाउ देखाएर बाँच्न, करङ देखाएर बाँच्न र च्यातिएको प्यान्टको ग्राफ देखाएर बाँच्न र नयाँ सडकको ‘इम्पोर्टेड’ सभ्यताको मर्करी लाइटमा देशी कार्टुन भएर बाँच्न अस्पतालबाहिर हुत्याइदिनुलाई डाक्टरले जीवनदान दिने सम्झिरहेको रहेछ ।
शंकर भन्न चाहन्छ— डाक्टर, घाउ चिर्ने चक्कुले, पट्टीले, सुईले र औषधिका चक्कीहरूले कसैलाई पनि जीवन दिन सक्तैनन् । फेनाइलको झोलले पुछेको अस्पतालको गनाउने र चिसो भुइँले जीवन उमार्न सक्तैन, स्प्रिट र इथरमा भिजेको हावाले जीवनतत्वलाई जोगाएर राख्न सक्तैन र दिनका दिन फेरिने यो सेतो तन्नामा पनि जीवन लुटपुटिएर बस्न सक्तैन ।
जीवन दिन सक्छ कलकारखाना, उद्योग र कामले र आत्मसम्मानलाई बचाउन सक्ने उन्मुक्त वातावरणले । जीवन खेतको हरियालीमा र खोलाको निर्बाध गतिमा हुन्छ, जीवन सूर्यबाट बेरोकटोक आउने उज्यालो र न्यानोमा बाँचेको हुन्छ ।
तर, कसैले उसलाई यो भन्ने मौकै दिँदैन । डाक्टर आउँछ, उन्माद भरिदिन्छ र नर्स आएर उसको पाखुरामा मर्फिन र पेथड्रिनको इन्जेक्सन घुसारिदिन्छे । अनि उसको जिब्रो नै लटपटिन थाल्दछ, उसका नसाहरू शिथिलताका आवेशमा अशक्त भइदिन्छन् र उसको चेतना कृत्रिम निद्रामा बेहोस भइदिन्छ ।
एक घण्टा वा दुई घण्टा यस बेहोसीमा हराएपछि जब फेरि ऊ आँखा खोल्छ, सबभन्दा पहिले उसले त्यही उज्यालोलाई देख्छ– झ्यालको काँचबाट छिरेर आएको उज्यालो अनि मर्फियाको चक्रव्यूह तोडी दुखाइको तीव्र अनुभूतिले उसको टाउको, छाती र ढाडमा सुइरो रोप्न थाल्दछ ।
उज्यालोले बाहिरको संसारबाट बेकारी, लाञ्छना र अनेक व्यवधानहरू बोकेर ल्याएको हुन्छ र यी घटनाको सम्झना जसले उसको अस्तित्वलाई अहिले एघार नम्बरको बेडसँग गाँसिदिएको छ…!
घण्टौँदेखि उमालिराखेको चियाको तीतो र टर्रो पानीलाई दश पैसामा किनी आँखाभरि धुवाँको पिरो पसाउँदै बिहानबिहानै होटेल भनाउने एउटा खोरबाट बाहिर निस्कन्छ र मोटरले किच्ला भन्ने सम्भावनालाई आफ्नो मुटुभित्र पलाउन दिई सशंकित पाइलाले सडक काटी किनारामा उभिन पुग्छ ।
त्यहाँ उभिएर कहाँकहाँ जाने, एउटा भीआईपीजस्तै कार्यक्रम बनाउन थाल्दछ । अनि दिनभरिको ‘एन्गेजमेन्ट’ बनाई एक पाइला बडो आत्मविश्वासका साथ ऊ चालिदिन्छ ।
पाइलाहरू चल्दै जान्छन्, एक अफिसदेखि अर्को अफिस, सिंहदरबारका एक मन्त्रालयदेखि अर्को मन्त्रालय र काठमाडौंका एक गल्लीदेखि लिएर अर्को गल्लीसम्म सचिव र म्यानेजरका बंगलाहरू खोज्दै । तर, मुखभरि किचिरकिचिर सुपारी चपाउँदै चुरोटको धुवाँको कवचमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दै झिँजो पन्छाउन भनिएका शब्दहरू ‘दसैँपछि’, ‘भोलि’, ‘ठाउँ छैन’ले क्रमशः उसका पाइलाबाट आत्मविश्वासको दरो भावलाई खोस्दै लान्छन् ।
बेलुकीसम्म भोक, निराशा र लज्जाका भावनाहरूले उसका पाइलालाई लुलो बनाइसक्छन् । सकिनसकी पाइला चाल्दै साँझमा ऊ फेरि त्यही होटेलको खोरमा आइपुग्छ र बेन्चको एक छेउतिर आफूलाई राखिदिन्छ ।
त्यस बेलासम्म त्यहाँबाट चिया र दूधका केत्लीहरू हटिसकेका हुन्छन् । त्यो ठाउँ चिया पसलबाट भट्टीमा बदलिसकेको हुन्छ । केत्लीको ठाउँ जाँड–रक्सीले भरेका घ्याम्पाहरूले लिइसकेका हुन्छन् र पसलनी बूढीको ठाउँ उसकी तरुनी छोरी मनमायाले लिइसकेकी हुन्छे ।
होटेल हरेक दिन दाउराको पिरो धुवाँ र चियाको तीतो पानी र पसलनी बूढीका लुला नसाहरूको काम्दो ‘सर्भिस’बाट सुरु हुन्छ र छ्याङ, रक्सीको मातको उत्तेजना र मनमायाको तरुनो शरीरका गर्मी र पसिनामा लुटपुटिएर टुंगिन्छ ।
बेकारी र चिन्ताका हरेक आक्रमणबाट मुक्त यहाँको परिवेशमा शंकर पनि केही छिनका लागि बाँच्न चाहन्छ । दिनभरिको पेटको भोकलाई ममका गोलाहरू पड्काएर धपाइदिन चाहन्छ, नसाहरूको थकाइलाई एक–दुई पेग रक्सीको तनाउमा मेटिदिन चाहन्छ र हलौँ भएर मनमायाको भरिलो जीउमा एक–एक म्वाइँ खाएर थपक्क उसका बगलमा सुतिदिन चाहन्छ ।
तर, यहाँ न रक्सीको नशामा कोही नाच्छ, न मनमायाको चोलोको गलाबाट चियाएर हेर्ने स्तनको तिरिमिरीमा अन्धो हुन्छ । न मनमायाको नांगो जीउसँग खेल्दाखेल्दा शिथिल भएर बाहिर निस्कन्छ ।
रक्सी र मनमायाको जोवन सब निमित्त हो जस्तो लाग्छ शंकरलाई । मुख्य पैसा हो, जसलाई आफ्नाआफ्ना खल्तीमा लिएर मानिसहरू यहाँभित्र पस्छन् र त्यस खँदिलो खल्तीको मोहनीमा सब नाच्छन्, उत्तेजित हुन्छन् ।
मनमायाको चोलो च्यात्ने र पेटीकोटको इँजार तोड्ने अधैर्य उत्तेजनाका सिकार त्यस बेलासम्म उनीहरू भइसक्छन्, जबसम्म उनीहरूको खल्तीको बन्दुकमा पैसाका कार्तुसहरू छन् । कार्तुस सकियो, बन्दुक चिसो भयो र सब शिथिल भएर सस्तो खालको एउटा चुरोट मुखमा च्याप्दै मुन्टो निहुराएर होचो ढोकाबाट बाहिर निस्कन्छन् ।
शंकरको खल्तीमा जम्मा बीस पैसा छ । दश–दश पैसाका गौ छाप भएका दुई पहेँला ढ्याक र ती बीस पैसामा सुक्खा चाउरिएको पाउरोटीका दुई टुक्राहरू मात्र किन्न सक्ने सामर्थ्य छ । दुइटा ‘कामधेनु’हरूले दुई टुक्रा पाउरोटी मात्र उसलाई दिलाउन सक्छन् ।
उसको अघिका बेन्चहरूमा मनमायालाई घेरेर मानिसहरू बसेका छन् र प्लेटका प्लेट मम, छोइला, भुटन र गिलासका गिलास छ्याङ–रक्सी रित्याइराखेका छन् र मनमाया उनीहरूलाई ‘सर्भ’ गर्न व्यस्त छे । अहिले यी सबको पहिलो दौर हो, जसमा ठट्टा गर्ने, जिस्कने र फिलामा चिमोट्ने क्रियाहरू मात्र भइराखेका छन् ।
शंकर सबभन्दा पछि छ र बीस पैसाको पाउरोटी किन्ने सुरले मनमायाको ध्यान कहिले यता जाला भन्ने संयोगलाई पर्खिराखेको छ । होहल्लाका माझमा उसको सुकेको भोको स्वर मनमायाका कानमा पस्न पाउँदैनन् । एक–दुईपल्ट उसले भनिरहेको थियो, ‘दुइटा पाउरोटी ।’ तर, मनमायाले सुनिन । अरू कसैले पनि सुनेन ।
सायद यस परिवेशमा अहिले पाउरोटीको कल्पना पनि कसैको मगजमा उम्रन सक्तैन । सुन्नेले सोच्यो होला– बाहिर कुनै भोकाएको बच्चोले आमासँग पाउरोटी माग्यो होला वा किनिदिने जिद्दी गर्यो होला ।
शंकर बसिराख्छ । उसको खाली पेटमा भोकको भकुन्डो उफ्रिरहेछ र ऊ भकुन्डोका ती मारहरूले आफूलाई खुब कमजोर अनुभव गर्छ । अशक्तताको त्यस दौरमा ऊ सम्भावनाहरूलाई पर्खन मात्र सक्छ र यस पर्खाइको क्रममा ऊ अनायास मनमायातिर एकटक हेरिराखेको हुन्छ ।
मनमाया राम्री छे । उमेरले पनि जवान छे । नोकरी पाए शंकर उससँग बिहे गर्न सक्छ । अनि मनमाया उसका लागि मात्र मम पकाउनेछे, उसका लागि मात्र एउटा सानो गिलासमा अलिकति रक्सी हातमा लिई लाज मान्दै उसका नजिक आउनेछे र उसका लागि मात्र लाज मानीमानी भित्री लुगाहरू फुकालिदिनेछे ।
नोकरी, बिहे र सम्भोगको कल्पनाले शंकरमा एक्कासि कतैबाट बल आउँछ । ऊ जरुक्क उठ्छ र सब बेन्चहरूलाई नाघ्दै, बसेकाहरूलाई लात्तीले छुँदै मनमायाका सामुन्नेमा उभिन पुग्छ र जोरसोरले भन्न थाल्दछ— माया ! अघिदेखि कराउँदाकराउँदा घोक्रो सुकिसक्यो…।
हिजोअस्तिका सब सीमाहरू नाघेर आएको शंकरको यस व्यवहारले मनमाया छक्क पर्छे । ‘क्या हो ? आज दुइटा पाउरोटी मात्र चाहिन्नजस्तो छ नि !’ कर्के आँखाले शंकरतिर हेर्छे ।
दुइटा पाउरोटीको सम्झना र उसको मुठीमा कैद दुइटा दशपैसे ढ्याकहरूले उसको सब जोसलाई पानीपानी पारिदिन्छ । उसका नसाहरूबाट बल हराएर जान्छ र उसको जीउ फत्रक्क गलेर आउँछ ।
‘के चाहियो भन । नयाँ सडकमा आज खुब दाताहरू फेला परेछन् । साइत बनाएर निस्केका रहेछौ ।’ मनमाया आफ्ना आँखामा विचित्र व्यंग्य लिई उसका मुखमा हेर्छे ।
‘मगन्तेले पनि रक्सी खान पाउनु साइत त हो नि !’ एकजना कोही पछिबाट भन्छ ।
ऊ केही बोल्न सक्तैन ।
‘रक्सी मात्र होइन, आज मगन्तेले मनमायालाई पनि ताकेको छ । खुब मायालु पारामा भनेको थियो नि— माया !’ अर्कोले त्यही बीचमा बोल्छ ।
‘हामी सब छौँ । लाज लाग्दो होला !’ अनि अर्कोले भन्छ ।
‘ए, ए ! केको लाज ? खा रक्सी, कति खान्छस् र लग् आफ्नी मायालाई त्यो कुनामा र आफ्नो जुनी फेर् आजको राम्रो साइतमा !’ पहिलो मान्छेले आफ्नो गिलास रित्याउँदै भन्छ ।
‘आज उसले नयाँ सडकतिर कुनै टुरिस्टलाई मुडेजस्तो छ !’ एउटा अर्को आवाज पनि त्यहाँ थपिन्छ । अड्कल र निष्कर्षको अन्योलमा झुन्डिएको आवाज ।
शंकर बडो विचित्र स्थितिमा पर्छ । न ऊ पाउरोटीको माग गर्न सक्छ, न त्यहाँ धेरै बेर उभिन सक्छ । केही नबोलेर उसले फर्कनै बेस ठान्यो । ऊ जानलाई यसो फर्कन थाल्दछ ।
किन फर्केको ? कहाँ जाने ? प्रश्नहरू उसमाथि ओइरिन थाल्दछन् । ‘पैसा नभएको बेलाचाहिँ घण्टौँ यहाँ बसेर ठाउँ ओगटिराख्ने र आज पैसा भएको दिनचाहिँ अर्को पसलमा जाने होला !’ माया भन्छे ।
‘ए तँ अर्को कहाँ जाने ? जान पाउँदैनस् !’ सब उसमाथि जाइलाग्छन् । कसैले उसलाई पछिल्तिरबाट धकेल्छ । कसैले उसको कमिजको कलर समाउँछ । कसैले एक मुक्का उसको पेटमा हानी नै हाल्छ । एक मुक्कापछि अनेकौँ मुक्काहरू बर्सन थाल्दछन् ।
(सिरहाको पदमपुर गाउँका कथाकार मुरारि अधिकारीको ‘प्रतीक’ पत्रिकामा २०२८ मंसिर–पुसको अंकमा प्रकाशित कथा । हामीले ‘उपलब्धि’ २०७६ कात्तिक–पुस : पूर्णांक २४ बाट साभार गरेका हौँ ।)